Fanadihadiana UMi SUPER amin'ny teny Espaniôla - Hery amin'ny vidiny mirary | Androidsis
Fanadihadiana UMi SUPER, fahefana amin'ny vidiny lafo
Miguel Gaton | | hevitra
Nandritra ireo andro farany izay dia fitsapana ny UMi SUPER, finday avo lenta avy any Chine izay manana vidiny mahafinaritra $ 199 manoloana ireo fiasa mahaliana atolotray azy. Andao hojerentsika ny famakafakana ny UMi SUPER Amin'ny antsipiriany bebe kokoa.
Araka ny efa nomarihintsika tamin'ny andalana voalohany, ny zavatra voalohany mahataitra antsika momba ity fitaovana ity dia ny hery atolotray ambanin'ny hood: 4 GB an'ny RAM, ROM 32GB, Android 6.0 Marshmallow ary a Helio P10 Octa Core CPU, izy rehetra dia mahazatra kokoa amin'ny telefaona avo lenta kokoa noho ity UMi ity.
1 Endri-javatra ao amin'ny UMi SUPER
2 Sarin'ny terminal
3 UMi SUPER famolavolana
4 Fampisehoana, teboka matanjaka indrindra
8 Tombontsoa sy lafy ratsy
9 Vidio UMi SUPER
Endri-javatra ao amin'ny UMi SUPER
Raha iray amin'ireo mitady terminal ianao miaraka amina endri-javatra lehibe nefa tsy te-handany ny vola izay ambony indrindra amin'ny vidiny, dia natao ho anao manokana ireo modely toa an'io UMi SUPER io. Miaraka amin'ny vidiny farany 199,99 USD ihany no mividy mivantana amin'i Tomtop (fa azonao atao koa fihenam-bidy amin'ny € 10 mampiasa ny kaody fihenam-bidy Super10), manolotra anao ny UMi:
Efijery 5,5-inch miaraka amina endrika 2.5D ary vahaolana Full HD (1.920 1.080 x XNUMX teboka).
RAM 4 GB (LPDDR3)
ROM 32GB izay azo hitarina hatramin'ny 256 GB amin'ny fampiasana karatra microSD
Rafitra fandidiana Android 6.0 Marshmallow
processeur MediaTek Helio P10 8-core
Fakantsary lehibe 13 megapixel ary 5 megapixel aloha
seranan-tsambo USB Type-C
Mpamaky ny dian-tànana Hafanàm-po an
Ny UMi dia manana a Efijery 5,5-inch miaraka amin'ny FullHD izay novokarin'i Sharp ary izy dia arovan'ny Gorilla Glass 3. Amin'ny haavon'ny loko sy ny hamafin'ilay sary dia tena tsara ny valiny ary mitazona ny fahatsapana kalitaon'ny ankapobeny natolotry ny terminal. Ny olana tokana hitanay dia ny fahalotoan'ny efijery amin'ny dian-tànana somary mora foana ary mba tsy hanan-tsiny ny smartphone dia mila manadio azy matetika isika.
UMi SUPER famolavolana
Ao aorian'ny UMi SUPER
Ny UMi SUPER dia manana famaranana mahonena sy kanto. Noho ny fananganana vy tsy mitovy amin'ny olona, ​​ny terminal dia manome fahatsapana fahamendrehana sy fanoherana lehibe.
Etsy aoriantsika dia afaka mahita ny sary famantarana UMi, ny mpamaky ny dian-tànana, ny fakan-tsary ary ny tselatra avo roa heny.
Iray amin'ireo teboka manasazy indrindra an'ity fitaovana ity ny ny hateviny sy ny lanjany be loatra. Ireo teboka roa ireo dia hita taratra mazava tsara amin'ny batterie 4.000 mAh sy ny efijery 5,5-inch, saingy mbola mino izahay fa 195 grama sy 8,5 mm ny hateviny dia angona izay mazava tsara fa azo hatsaraina ary asio marika ny molibola lehibe an'ny SUPER.
Fampisehoana, teboka matanjaka indrindra
Ary ankehitriny isika dia mandeha amin'ireo tombony natolotry ny UMi SUPER, izay tsy isalasalana ny teboka matanjaka ao amin'ny tahan'ny kalitaon'ny vidiny. Ny UMi dia afaka mandeha an-doha amin'ny terminal avo lenta nefa tsy misy fahasarotana. Ny 10-bit, 64-core Helio P8 processeur miaraka amin'ny 4GB an'ny LPDDR3 RAM dia tena milamina tokoa amin'ny karazana fampiharana sy lalao rehetra.
Fifaliana lehibe iray hafa koa ny fisian'ny Android 6.0 Marshmallow. Ny rafitra fiasa dia tonga nefa tsy misy fampiharana efa napetraka mialoha, izay ankasitrahana rehefa hitazona ny habaka kapila maimaim-poana indrindra amin'ny andro voalohany.
Izy io koa dia misy Seranan-tsambo USB karazana C sy mpamaky rantsantanana toy ny singa asongadina amin'ny fitaovana amin'ity faritra ity.
Fakan-tsary 13 megapixel an'ny UMi SUPER
Amin'ny haavon'ny fakantsary dia misy fakan-tsary lehibe 34172 megapixel Panasonic MN13 izay mandeha tsara. Tsy fakan-tsary faran'izay tsara eny an-tsena (indrindra amin'ny toe-java-maivana) fa io no miasa. Ny fakan-tsary eo anoloana dia manana 5MP misy fakan-tsarin'i GalaxyCore izay ampy handraisana selfie marina nefa tsy misy fanagejana be.
Araka ny efa nolazainay tetsy aloha, ny batterie UMi dia gaga ihany satria miresaka momba ny 4.000 mAh izay manome ny terminal izahay fizakantena manakaiky ny 45 ora. Misaotra ny haitao haingam-pandeha PE + nahavita nihena tanteraka ny bateria tao anatin'ny 2 ora. Io dia voampanga amin'ny alàlan'ny karazana USB C, izay midika fa raha manana mpandahateny na batery ivelany tsy mifanaraka amin'ity karazana seranana ity isika dia mila mampiasa adaptatera.
Famerenana ny: Miguel Gaton
Efijery 5,5 santimetatra
USB karazana C, mpamaky rantsantanana sns.
Ny lanja sy ny habe tafahoatra
Tena maloto amin'ny alàlan'ny dian-tànana ny efijery
Vidio UMi SUPER
Ny UMi SUPER dia amidy ao TomTop a vidiny manomboka amin'ny 199,99 USD. Fa izao dia afaka mahazo fihenam-bidy 10 € ho an'ny trano fitahirizanao any Eropa amin'ny alàlan'ny kaody fampiroboroboana Super10.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » hevitra » Fanadihadiana UMi SUPER, fahefana amin'ny vidiny lafo
Pablo Caro dia hoy izy:
̋ Ahoana no ampitahanao amin'ny Vernee Apollo Lite?
Valiny tamin'i Pablo Caro
Miguel Gaton dia hoy izy:
Izy ireo dia terminal roa mitovy amin'ny fahitana. Ny fakantsary vernee dia somary tsara kokoa ary amin'ny haavo Vernee Apollo Lite dia somary maivana kokoa izay ankasitrahana. Fa ny fiainana bateria dia tsara kokoa noho ny UMi.
Valiny tamin'i Miguel Gatón
Misaotra anao. Ny lg g2 ko dia efa nosoloina ary mitady alternatives aho.
Maicol Andres Taboada dia hoy izy:
Eny ry zalahy, ahoana ny hevitrao momba ity ekipa goavambe manohana ny zava-drehetra ity? https://www.youtube.com/watch?v=lN5cRd_Gu_8&feature=youtu.be PO
Valiny tamin'i Maicol Andres Taboada
Fitsapana fitsapana vaovao sy famolavolana fitaovana ho an'ny Geekbench 4
Minima Player, mpilalao mozika vaovao ho an'ny Android miaraka amina endrika mahavariana izay mampanantena zavatra betsaka